Na-eto eto radish | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Na-eto eto radish
Jiri ọgwụ "Amprolium" na ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ: ntụziaka maka ojiji
Onye ọ bụla na-elekọta ugbo na-eche banyere ahụike na mmepe nke anụ ụlọ ha. Amprolium dị mma maka nnụnụ na rabbits, bụ ndị nwere ike ịmalite ọrịa ndị dị ka eymerioz na coccidiosis. Na isiokwu a bụ banyere otu esi etinye ya na mmetụta ndị dị aṅaa na ịdọ aka ná ntị dị. "Amprolium": ihe mejupụtara na ịhapụ ụdị Anticoccidia "Amprolium" bụ ntụpọ na-enweghị ntụpọ ma na-enweghị ntụpọ.
Ịmụta na-eto eto radishes: ịkụ ihe, nlekọta, owuwe ihe ubi
Onye ọ bụla na-elekọta ubi na listi ọrụ ya nwere ọdịbendị, mgbe ọ na-eto eto nke bụ ihe ọ bụla na-adịghị njọ, ihe ee ọbụghị. N'etiti mkpụrụ dị otú ahụ maka ọtụtụ ndị, radishes abụghị ndị ọzọ. Omenala kachasị mma. O yiri ka enwere ihe ọmụma zuru ezu maka ịkụ mkpụrụ nke radish, mana owuwe ihe ubi adịghị enwe obi ụtọ - agbapụ ụda ga-eto.
Ihe mere radish ji dị ilu, na nsogbu ndị ọzọ mgbe ị na-etolite
Ọtụtụ ndị na-elekọta ndị na-elekọta ubi nwere radishes metụtara oghere nke oge ihe oriri, ụba mmiri na mmeri mbụ n'ime ogige ahụ. A sị ka e kwuwe, ihe ọkụkụ ndị a adịghị achọ ọnọdụ pụrụ iche ma dị mfe iji nọgide na-elekọta. Ma, ọ dị mwute na ha na-abụkwa ndị mbụ na-emechu ihu. Gịnị mere radish na-aga akụ ahụ, na-enye obi ilu ma ọ bụ oghere, ihe ndị na-eme ka ndị na-eto eto na-emepụta nri, ihe ị ga-eme iji chekwaa ihe ọkụkụ - anyị ga-akọ banyere ihe a niile na nke a.
Atụmatụ nke ịkụ na radish na-eto eto na griin haus, nkwadebe, na-elekọta
Radish bụ otu n'ime akwụkwọ nri ndị kachasị ewu ewu na ụlọ ahịa, ma ọ bụrụ na ị ka na-eche na ị ga-etolite ya n'afọ niile, mgbe ahụ ọ dịghị ego maka osisi ahụ. Otú ọ dị, iji nweta ihe ọkụkụ na-atọ ụtọ n'oge ọ bụla n'afọ, ọ bara uru ilekọta ọnọdụ kwesịrị ekwesị maka uto na mmepe ha.
Otu esi eche maka ime ụlọ
Early Russian, mfri amị mkpụrụ "Valentina": nkọwa nke dị iche iche na uru
Pear "Williams na-acha uhie uhie": àgwà, pros na cons
Mkpụrụ dị elu, nchekwa, mbenata ọrụ - agrofibre maka ịmalite strawberries
Orange: ole calorie ole, ihe vitamin ndị dị, gịnị bụ abamuru, nke nwere ike imerụ ya
Kedu uru na nsogbu cowberries
Akụrụrụ turkeys na-azụlite na ezinụlọ
Nkọwa banyere otu esi echekwa carrots n'ime okpuru ulo n'oge oyi n'ime akpa shuga